Tsy azo lavina, amin’ny maha-protestanta antsika, ny maha-zava-dehibe ny fampianarana Soratra Masina, ary fampianarana miainga amin’ny loharano madio mangalahala dia ny Baiboly izany. Ny mpanitsy fivavahana dia nametraka ho isan’ny foto-pinoana protestanta ny hoe “SOLA SCRIPTURA” na ny “SORATRA MASINA DIA NY SORATRA MASINA IRERY IHANY”. Noho izany ary, dia hisy fampianarana mitohy momba ny foto-kevitra ara-tSoratra Masina eto amin’ity site web ny fiangonana ity ary anombohana izany dia fanadihadiana mahakasika ny anjely.
Ny teny ilazàna ny “anjely ao amin’ny Baiboly dia MALAK amin’ny teny hebreo ary AGGELOS (vakiana hoe “angelos” amin’ny teny grika). Ny hevitr’ireo teny ireo dia iray ihany: IRAKA. Ny anaran’ny boky MALAKIA araka izany dia IRAKO (Mon Messager) no heviny.
-Fiandrianana (Kol 1:16)
-Fanapahana (Efes 1:21; Kol 1:16)
-Fahefàna (Efes 1:21; Kol 1:16; I Pet 3:22)
-Ny Serafima (Isaia 6:2): ny heviny dia hoe “mirehitra, mivaivay”. Midera an’Andriamanitra sy ny fahatsaràny rehetra no asany. Ilain’Andriamanitra ihany koa izy ireo hanadio sy hamafa ny heloky ny olo-masina. Manana elatra enina izy ireo, ny roa manarona ny tavany, ny roa manarona ny tongony ary ny roa anidinany. Mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianan’Andriamanitra izy ireo (Isa 6:1-8)
-Ny Kerobima izay resahina matetika ao amin’ny Soratra Masina (Gen 3; IISam 22; Ez 10; Heb 9:5): manana tanana, tongotra ary elatra izy ireo. Mahavariana ny fitantaran’I Ezekiela azy ao amin’ny toko faha-10. Mitarehin’olona izy ireo, ary efatra ny tavany ary efatra ihany koa ny elany. Ny bokin’ny Genesisy dia mampiseho fa niambina ny zaridaina tao Edena ny Kerobima (Gen 3:24). Teo ambonin’ny fiaran’ny Fanekena koa izy, mariky ny hery sy ny fahamasinan’Andriamanitra (Eks 25: 17-21).
- Arikanjely (ITes 4; Joda 1:9)
-Gabriela (Dan 8; Dan 9:21; Lk 1:19-26).Ny anarana hoe Gabriela dia “mahery Andriamanitra”. Ny asany dia ny mitondra ny Tenin’Andriamanitra na ny hafatra ho an’ny olona tian’Andriamanitra hiantefan’izany, toa an’I Maria ao amin’ny Lioka 1:28-38.
-Nampahery ihany koa an’I Daniela ny anjely Gabriela, rehefa napahafantatra azy ny fahotan’ny zanak’olombelona (Dan 8:15-19). Niverina indray koa izy niteny sy nampianatra fahendrena, izany hoe ny fahalalàna an’Andriamanitra (Dan 9: 20-23).
Manompo an’I Jesosy sy mankalaza Azy ihany koa izy ireo (Mat 4:11; Mat 13:41; Mat 25:31; Mat 26:53; Lk 3:13; Lk 22:43; Heb 1; Ap 23:16).
Ny anjely dia tanteraka amin’ny fankatoavana an’Andriamanitra izany hoe tsy misy tsiny ary tsy misy ota. Na izany aza, zava-boaharin’Andriamanitra ihany izy ireny fa tsy Andriamanitra na mitovy aminy na dia mamirapiratra sy manan-kery aza. Tsy azo atao na oviana na oviana ny miankohoka na mivavaka aminy (Rom 1:24-25; Kol 2:18; Apo 19:10; Apo 22:9).
Nisy kosa anefa anjely niodina sy nikomy tamin’Andriamanitra (Mat 25:41; II Pet 2:4; Jd 1:6; Ap 12;9). Toy izany indrindra, Satana dia anjely ihany koa taloha, ary nanana toeram-boninahitra, saingy naongana sy nazera, noho ny avonavony (Isa 14:4-23; Ez 28:11-19).
-Be voninahitra sy masina (Lio 9:26)
-Tsy mety maty (Lio 20:36)
-Sady tsy lahy no tsy vavy (Mat 22:30)
-Fanahy izay ampiasain’Andriamanitra (Heb 1:14)
-Mifaly ny amin’ny famonjena fanahy (Lio 15:10)
-Afaka mahita ny tavan’Andriamanitra (Mat 18:20) fa isika kosa tsy mahazo mahita izany (Eks 33:20)
1. vintage rolex air king (site web) | 13/04/2012
2. Benjamin M | 17/04/2012